Uru nke Ngwá Agha Ngwá Agha, Ngwá Agha Na-ekpocha Ngwá Agha DaWei
ihe ndị dị mma nke ịmepụta ọkụ, ịme ihe ike, ịkasi ike, ịgbaze na ịkwagharị, wdg.
Ntak ị ga-ahọrọ ịmepụta ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, convection, na-egbuke egbuke ma ọ bụ usoro ọzọ ọkụ ọkụ? Nke a bụ nchịkọta dị mkpirikpi nke uru ndị dị mkpa nke siri ike nke oge a na-emepụta ntinye ọkụ maka ịkwalite ọrụ:
* Ịkụ ọkụ ngwa ngwa
Ugbo oku na-etinye n'ime akụkụ ahụ n'onwe ya site na ọkụ ọkụ eletrik ọzọ. N'ihi ya, a na-ebelata ngwa ahịa ngwaahịa, ntụgharị na ịjụ ọnụego. Maka kachasị mma ngwaahịa, a ga-ekewapụta akụkụ ahụ n'ime ụlọ mechiri emechi na agụụ, inert ma ọ bụ mbenata ikuku iji kpochapụ mmetụta nke oxidation. Enwere ike ịbawanye ọnụego mmepụta n'ihi na itinye n'ọkwa na-arụ ọrụ ngwa ngwa; a na-ekpo ọkụ ozugbo na ozugbo (> 2000º F. na <1 sekọnd) n'ime akụkụ ahụ. Mbido bụ ihe ozugbo; enweghị ikpo ọkụ ma ọ bụ wetuo obi dị mkpa. Enwere ike mezue usoro kpo oku a na-arụpụta ụlọ, na-esote igwe na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-ekpo ọkụ, kama izipu akụkụ nke akụkụ n'akụkụ ọkụ ọkụ dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ n'okpuru ya. Dịka ọmụmaatụ, usoro brazing ma ọ bụ ịgbado ọkụ nke chọrọ oge na-eri oge, usoro kpo oku na-apụ apụ nwere ike dochie ya ugbu a na-aga n'ihu, usoro nrụpụta otu ụzọ.
* Ọgụgụ ọkụ
Mkpọpu ọkụ na-ekpochapụ ihe ndị na-ekwekọghị ekwekọ na nsogbu ndị metụtara
na ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ na ụzọ ndị ọzọ. Ozugbo a kwadoro usoro ahụ ma kwado ya, enweghị ọrụ ma ọ bụ mgbanwe; ihe kpo oku a na-emeghari ma na-agbanwe agbanwe. Site na usoro usoro ihe siri ike nke oge a, njikwa ọnọdụ okpomọkụ na-enye nsonaazụ edo; ike nwere ike ịgbanwu ma ọ bụ mechie. Na njedebe ikuku na-emechi, elu induction sistem kpo oku nwee ikike iji tụọ okpomọkụ nke akụkụ ọ bụla. Specific ramp elu, jide na ramp ala udu nwere ike ike & data nwere ike e dere n'ihi na onye ọ bụla akụkụ na-agba ọsọ.
* Ịkụcha Ụlọ Ọkụ
Sistem kpo oku emela ka ihe ọkụkụ dị iche iche nke ọdịnala ọkụ; ntinye bụ usoro dị ọcha, nke na-adịghị emetọ emetọ nke ga-enye aka kpuchido gburugburu ebe obibi. Usoro ntinye na-eme ka ọnọdụ ndị ọrụ gị dịkwuo mma site n'iwepụ anwụrụ ọkụ, ọkụ ọkụ, ihe egwu egwu na oké mkpọtụ. Ịkụ ọkpọ dị mma na ịrụ ọrụ nke ọma n'enweghị ọkụ ọkụ ọ bụla iji mee ka onye ọrụ ahụ nọrọ n'ihe ize ndụ ma ọ bụ mechie usoro ahụ. A naghị emetụta ihe ndị na-adịghị arụ ọrụ ma nwee ike ịnọ na nso nso na mpaghara ọkụ ahụ na-enweghị mmebi.
* Chebe Ike
Enwerela ụgwọ ego bara ụba? Usoro a na-arụ ọrụ nke ike dị iche iche na-agbanwe ruo 90% nke ike na-etinye ike n'ime okpomọkụ bara uru; Igwe ọkụ na-emekarị bụ nanị 45% ike-arụmọrụ. Ma ebe ọ bụ na ntinye anaghị achọ ka okirikiri ala ma ọ bụ nke dị jụụ, ọ na-ebelata nkwụsị ọkụ ka ọ dị ntakịrị. Ntughari na nhazi nke usoro mmeghe na - eme ka o kwekorita ya na usoro oma nke oma.
uru nke ntinye ọkụ